RASMI: Cristiano Ronaldo oo ku biiray kooxda Juventus + Sawirro | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha RASMI: Cristiano Ronaldo oo ku biiray kooxda Juventus + Sawirro
RASMI: Cristiano Ronaldo oo ku biiray kooxda Juventus + Sawirro
(Athens) 10 Luulyo 2018 – Haatan waa rasmi, wareegistii maalmahanba la hadal hayay ee uu Cristiano Ronaldo ugu biirayay kooxda Juventus.
Naadiga Real Madrid webkeeda rasmiga ah kusoo qortay: «Wuxuu naadigu ku dhawaaqayaa, in si waafaqsan codsiga laacibka, ay aqbashay inuu ku biiro kooxda Juventus».
Jookarkii Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa la sheegayaa inuu Serie A ugu soo wareegey lacag rikoodh jebis ah oo dhan €105m, taasoo ah tii ugu badnayd ee ay koox horyaalkaasi ka dhisani laacib kusoo iibsato taariikhda.
Wakiilka CR7 ee Jorge Mendes ayaa maanta la kulmay maamulka Real Madrid si uu u ogaado inay aqbaleen dalabka Old Lady, halka madaxwaynaha Juve ee Andrea Agnelliayuu dayuurad khaas ah u qaatay Giriigga si uu u salaamo ninka haysta billadda Ballon d’Or oo halkaa fasax u jooga.
Ronaldo ayaa Real Madrid ku biiray sanaddii 2009, waxaana la yaab leh inuu dhaliyay goolal ka badan kulamada uu ciyaaray, kuwaasoo kala ah 438 kulan iyo 450 gool.
Previous articleSAAMAYNTA RONALDO: Saamiga Juventus oo cirka isku shareeray!
Next articleRASMI: Hay’adda Elliott oo la wareegtey milkiyadda AC Milan